डंडीफोरको दाग अनुहार भरी छ ? यसरी हटाउन सकिन्छ – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /Tips/डंडीफोरको दाग अनुहार भरी छ ? यसरी हटाउन सकिन्छ
अनुहारमा आउने डन्डिफोर र त्यसको दागले धेरैलाई सताईउनुका साथै कुरुप पनि बनाएको हुन्छ । यस्ता दागहरु लामो समयसम्म अनुहारमा रहिरहने भएकाले मानिसहरु प्राय यसको चिन्तित बनेका हुन्छन् । कतिपयले यस्तो दाग हटाउनका लागि विभिन्न औषधिको प्रयोग पनि गर्ने गर्छन् । तर यस्तो दाग हटाउन लगाउने औषधिले अन्य छालाका समस्याहरु उत्पन्न गर्ने पनि गर्छन् ।
यस्ता दागका लागि भान्सामा नै पाइने केही औषधिहरुको प्रयोग गर्न सकिन्छ । जसले सजिल्यै दाग हटाउन मद्दत गर्छ । डन्डिफोरको दाग हटाउनकोलागी तपाईँले घियू कुमारीको प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ । यसले छालालाई निकै फाइदा दिन्छ । यसले छालालाई कोमल बनाउँछ । तर यसले दाग कम गराउँछ । डन्डिफोरको दागमा दैनिक घ्युकुमारी जेल लगाउँदा रातभरीमा दाग हराउँछ । यस्ता घरेलु उपाय अपनाउनाले डंडीफोरको दाग हटाउन सहयोग गर्दछ । तपाईंको अनुहार सुन्दर देखिने छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **